Warar hor leh oo ka soo baxaya weerarkii Xalane iyo Shabaab oo gacanta ku dhigay.. - iftineducation.com
Warar hor leh oo ka soo baxaya weerarkii Xalane iyo Shabaab oo gacanta ku dhigay..
iftineducation.com – Warar hordhac ah ayaa ka soo baxaya weerarkii saacado ka hor ka dhacay xarunta ugu weyn AMISOM ee Xalane oo ku taalo Muqdisho.
Kooxo ku hubeysan bambaanooyin iyo Qoryo Fudud ayaa xarunta Xalane ka weeraray qeybka Isbitaalka,kuwaasi oo mudo saacado ah ka dhex dagaalamayay xarunta.
Qaraxyo iyo rasaas xigtay ayaa laga maqlayay halka weerarka uu ka dhacay,waxaana si dhab ah loo ogaan Karin qasaaraha ka dhashay weerarkaasi.
Al-shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyada weerarka inkastoo si cad u faah faahin qasaaraha dagaalka uu ka dhashay.
Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicklos Keya ayaa war kooban uu ku soo qoray bartiisa Twitterka ku cambaareeyay weerarka garoonka diyaaradaha lagu qaaday iyo Ciidamada AMISOM ay difaacayaan, isla markaana Argagixisada aanay marnaba hor-joogsan doonin horumarka Soomaaliya.
Waxaana daqiiqado kooban hakad galay howshii Garoonka diyaaradaha oo u dhow xarunta la weeraray.
Bishii September ee sanadkii 2009 ayay aheyd markii Al-Shabaab ay weerartay Xarunta Xalane, iyadoo weerarkaas loo adeegsaday labo baabuur oo ku buufsanaa Calamadaha UN-ka oo ahaa kuwa aan xabadaha karin ee horay Al-Shabaab uga qaateen Xarumihii Hey’adaha UN-ka ee ku yaalay Gobolada Koofureed.
Farxiya fiska iyo farxiya kabayare oo isku bahaystay shoowga holand dhulkana ku jiiday fartuun cumar